आज आइतबार सुन र चाँदी दुबैको भाउ स्थिर ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कतिमा कारोबार हुँदैछ….. – SUDUR MEDIA
आज आइतबार सुन र चाँदी दुबैको भाउ स्थिर ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कतिमा कारोबार हुँदैछ…..
April 4, 2021 AdminLeaveaComment on आज आइतबार सुन र चाँदी दुबैको भाउ स्थिर ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कतिमा कारोबार हुँदैछ…..
आज चैत २२ गते आइतबारको दिन सुन र चाँदी दुबैको भाउ स्थिर रहेको छ । आज आइतबार छापावाला सुन प्रतितोला ८७ हजार ४०० रुपैयाँ र तेजावी सुन प्रतितोला ८६ हजार ९५० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । गएको शुक्रबार पनि सुन यहि भाउमा कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै, चाँदीको भाउमा पनि आइतबार कुनै परिवर्तन भएको छैन । आइतबार चाँदी प्रतितोला १ हजार २४० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः चौथो स्टेजको क्यान्सरसँग जुधिरहेका ५ वर्षका छोराले आमालाई सोधे, ममी हामी घर कहिले फर्किने ? गीताको थामिएन आँशु ! बन्दिथ जम्मा ५ वर्षका भए । उनलाई क्यान्सर भएको थाहा छैन । सन् २०२० को नोभेम्बरदेखि अस्पताल भर्ना भएका छोराले गम्भिर प्रकृतिको क्यान्सरसँग जुधेको टुलुटुलु हेरेकी आमा गिताले सम्झिइन्की भक्कानिन थाल्छिन् । गिताका आँखामा शाँसु भरिएको धेरै भयो । आमाका आँशु हेर्दै छोरा बन्दिथले भन्छन् ममी हामी घर फर्किने कहिले हो ?
भारतको यो परिवार अहिले ठूलो समस्यामा परेको छ । एक मात्र छोरालाई चौथो चरणको क्यान्सबाट गुज्रीरहँदा आमा गिताले अब सर्वसाधारणले सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै आफ्नो छोराले पुर्नजीवन पाउने भन्दै भक्कानिइन् । बन्दिथको उपचारका लागि कम्तिमा पनि २५ लाख लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः बाल्यकालदेखि नै राजयोग लिएर ठूला हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, कहिलै हुँदैन धनको कमी ,धेरै मानिस आफ्नो राशि पढेर आफ्नो जीवनमा हुने घटनाका बारेमा पूर्वाअनुमान लगाउने गर्दछन् । कयौँ पटक त राशिमा लेखेको कुरा साँचो हुने गर्दछ । आज हामी केही यस्ता राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जसको भाग्यमा राजयोग लेखेको हुने गर्दछ ।
अर्थात यी व्यक्ति राजाको जस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी जन्म लिएका हुन्छन् ।ध नु राशिका व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुने गर्दछन् । यस्ता राशिका व्यक्तिमा पैसा कमाउने इच्छा निकै तिब्र हुने गर्दछ । यिनीहरु बाल्यकालदेखिनै धनी हुने गर्दछ ।
थप समाचार हेर्नुहोस्ः अर्कै संग भागेको भनिएकी गीता २ महिना पछि स,म्पर्कमा आइन। भिडियो हेर्नुहोसः
श्रीमतीलाई फोटो खिचेर पठाउन लगाउँदा खाट मुनि यस्तो देखेपछी श्रीमानले दिए डिर्भोस ,कारण यस्तो…..
टिकटक भाइरल अश्मिता रानापल र चौका दाउका गायक संगै मिडियामा, लास्टै रमाइलो गर्दै बैनी बनाए, संगै यस्तो नया गीत आउँदै ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….
कानुनी उ’पचारमा निस्केका मनोज गजुरेललाई पूर्वपत्नी ढकालले फर्काइन् यस्तो जवाफ…..
December 16, 2020 December 19, 2020 Admin
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल फाल्गुन ०१ गते शनिबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ फेब्रुवरी १३ तारिख